R. Hajatiana Léonard﻿ il y a 7 années
Namoaka fanambarana ny mpiasa
Ho setrin'ny note-circulaire navoakan'ny Secretaire Général-an'ny Minisitera miahy ny fananan-tany dia namoaka fanambarana ireo sendika telo tonta misy eo anivon'ny mpiasan'ny fananan-tany. Toa izao izany.
Nisy fanafihana mpivarotra iray tao Mahajanga. Nitifitra ilay mpivarotra teratany Karana. Tsy nahavoa ary nanao tifitra variraraka ireo jiolahy ka nahavoa olona maro. roa no maty vokatry ny ratra nahazo azy ireo.
Izay hahitana vola ihany no manjaka ao !
Ny mpivarotra no mibahana sy mameno ny “trottoir” voatokana ho an’ny mpandeha an-tongotra. Taratry ny fahasarotam-piainana amam-pitadiavana ankehitriny izany. Mampanahy mihitsy ny mety hisian’ny sinto-mahery sy ny asa ratsy ao Antsenakely rehefa amin’ny ora firavana hariva iny.
Akaiky ririnina ao Antsirabe
Rehefa tsy fotaka dia vovoka no ao Antsirabe
Vakinankaratra, tompon’ny ririnina. Mitorajofo ny vovoka sady mamirifiry ny hatsiaka ao Antsirabe amin’izao vanin’andro izao. Mahazo vahana indray ny gripa sy ny kohaka, ka ilaina fatratra ny mitandrim-pahasalamana manoloana ny fiovan’ny vanin-taona. Antom-pisian’ny Ranomafana Antsirabe.